Oslo oo awaamiir gaar ah oo corono-virus ku saabsan lagu soo rogi doono - NorSom News
Oslo oo awaamiir gaar ah oo corono-virus ku saabsan lagu soo rogi doono
Maamulka degmada Oslo ayaa maanta TV2 u sheegay inay beri oo talaado ah ay soo rogi doonaan awaamiir gaar ah oo looga hortagi doono faafitaanka xanuunka covid-19. Iyaga oo qaban doono shir jaraa´id oo ay awaamiirta cusub kusoo bandhigi doonaan.
Maalmihii ugu danbeeyay waxaa soo badaneysay tirada dadka Norway gudaheeda laga helayo xanuunka covid-19. Iyada oo magaalada Oslo ay aheyd meesha ay deganyihiin dadka ugu badan ee xanuunka laga helay maalmihii tagay.
Sabtidii lasoo dhaafay , dad kor u dhaafaya 20 qof oo xaflad ka qeybgalay ayaa xanuunka laga helay, halka 100 ku dhawaad qof. Oslo ayaa marka loo fiiriyo qiimeynta ay adeegsado hey´adda caafimaadka dadweynaha ee FHI, ah magaalo guduudan, taas oo ka dhigan in xanuunka uu kusii dhex faafayo.
Robert Steen oo ah madaxa waaxda caafimaadka Oslo ayaa TV2 u sheegay in awaamiirta ay maamulka degmada Oslo ay soo rogi doonaan ay noqon doonaan kuwo ka adag kuwa dalka guud ahaan xiligan ay dowlada dhexe kusoo rogtay.
Xigasho/kilde: Nye coronatiltak i Oslo tirsdag.
Previous articleBaaritaan: Raja, Wasiirka iigu sawirta badan xukuumada R.W Erna Solberg
Next articleOdoyaashii ka hortagay weerarkii masaajidka Bærum oo bilado la siiyay.